Chelsea iyo Tottenham oo ku jira Safka Kooxaha Xiiseenaya Xidiga Ajex ee Jurrien Timber | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Chelsea iyo Tottenham oo ku jira Safka Kooxaha Xiiseenaya Xidiga Ajex ee...
Chelsea iyo Tottenham oo ku jira Safka Kooxaha Xiiseenaya Xidiga Ajex ee Jurrien Timber
Labada kooxood ee Chelsea iyo Tottenham ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya saxiixa xiddiga Ajax ee reer Netherlands Jurrien Timber.
20 jirkaan ayaa durbadiiba si adag ugu jira qaabeynta dalkiisa waxaana 90Min ay soo warisay in Blues iyo Spurs ay isha ku hayeen.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kooxo kale oo aad u doonaya Timber sidoo kale. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Lyon, iyo Monaco ayaa dhammaantood lala xiriirinayaa ilaha aan soo sheegnay inay xiiseynayaan.
Timber wuxuu ka caawiyay de Joden inuu ku guuleysto Eredivisie xilli ciyaareedkii hore waxaana hadda loo arkaa inuu yahay xiddig muhiim u ah Erik ten Hag. 90Min wuxuu soo jeedinayaa in heshiiskiisu dhacayo 2024, laakiin wuxuu soo jiidan karaa dalabyo ka hor.
20 jirka Jurrien waa daafac dhexe. Haddii xiddigga aadka loo qiimeeyo uu ku raaxeysto olole kale oo wanaagsan Nederland, markaa Timber si dhaqso leh ayuu u heli karaa koox uu ku biiro.
Previous articleChelsea oo Qorsheeneysa inay iska iibiso Daafaca Antonio Rudiger
Next articleArsenal iyo Man United oo ku biiray liiska kooxaha doonaya xiddiga Bayer Leverkusen ee Florian Wirtz
Juventus 1-0 Roma, Moise Kean oo ka Caawiyay Bianconeri Guusheeda Caawa
Barcelona 3-1 Valencia, Barca oo dib boorka iskaga jaftay Horyaalka La-Liga
Kooxda Roma oo Caawa booqasho ugu tagtay kooxda Juventus ayaa halkaasi kala soo kulantay guul-daro iyadoo Roma ay lumisay Rigoore loo dhigay. Juventus...
Kooxda Barcelona ayaa boorka dib iskaga jaftay kadib guul ay caawa ka gaartay kooxda Valencia ciyaar ku soo dhamaatay 3-1. Xidigaha Barca ayaa...